Building Construction and Infrastructure: Imperial or SI မြန်မာ နိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေး ဒီဇိုင်း အတွက် Imperial vs Metrics (IP) - ဘယ်ယူနစ် ကို ရွေးမှာလဲ။
Imperial or SI မြန်မာ နိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေး ဒီဇိုင်း အတွက် Imperial vs Metrics (IP) - ဘယ်ယူနစ် ကို ရွေးမှာလဲ။
ဒီကိစ္စ ကို ဆွေးနွေးမယ် ဆိုရင် ကြောင်ရေချိုးတယ် လို့ ထင်မဲ့သူ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထား မှာ မလွယ်ကူ တဲ့ ပုံစံ လည်း တွေ့နေရပါသေးတယ်။ လက်မခံနိုင်တဲ့ လူအချို့ရဲ့ Resistance ကလည်း များပုံ ရပါတယ်။ အတင်း မတိုက်တွန်း လိုပါ။ ဦးစားပေးရမဲ့ အချက်လည်းမဟုတ်သေးပါ၊ စဉ်းစားဆင်ခြင် ကြည့် နိုင်ကြဘို့သာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ အတွက် Fundamental အခြေခံ ယူနစ် မှာ မက်ထရစ် အခြေခံ The International System of Units ( SI) ယူနစ် ကို အခြေခံ သင့်တယ် လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျနော့်အမြင် မှာ လက်ရှိ Myanmar National Building Codes တွေ မှာ အများအားဖြင့် Dual Units နဲ့ပေးထားပေမဲ့ အချို့ဌာနတွေ က ရှေးရိုးစွဲ လို့ IP မှ IP ဆိုတဲ့ အခြေအနေ ကတော့ ရေရှည် မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ SI units ကို ချက်ချင်း မပြောင်းပေး နိုင်သေးရင်တောင် ပြောင်းနိုင်ဘို့ လမ်းကြောင်း ကိုတော့ ဦးတည်ပေးရပါမယ်။ ဒါက ရေရှည် လိုအပ်ချက် ပါ။
တစ်ကမ္ဘာလုံး က နိုင်ငံအားလုံး လိုလို ပြောင်းလဲသင့်တာ ကို ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါပြီ။ IP units တွေရဲ့ မူလ ပင်ရင်း ဘိုးအေ နိုင်ငံကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန် အပါအဝင် သြစတေးလျား၊ ကနေဒါ စတဲ့ နိုင်ငံတွေ အားလုံး မက်ထရစ် စနစ် ကို ပြောင်းပြီးသွားပါပြီ။ ဒီလိုနိုင်ငံကြီး တွေ ကိုယ်တိုင် က သူတို့ ရိုးရာ အမွေအနှစ် မူရင်း သုံးနေကြစနစ်တွေ ကို ပစ်ပယ်ပြီး သူတို့ နဲ့ သိပ် အစေးမကပ် လှတဲ့ ပြင်သစ်တွေ ရဲ့ အခြေခံ ယူနစ် စနစ် ကို ပြောင်းယူသွားတာ အကြောင်းမဲ့ လို့ ထင်ကြပါသလား ခင်ဗျာ။
အခြား ASEAN နိုင်ငံ အားလုံး ကလည်း မက်ထရစ် သုံးနေကြပါပြီ။ မလေးရှား ဆိုတာ လည်း အရင်က အင်္ဂလိပ် စနစ် မို့ အင်ဂျင်နီယာ တွေ IP ယူနစ်တွေ ကို နားလည်တယ်၊ စကားပြောတဲ့ အချိန်မှာ သုံးနေဆဲ ဆိုပေမဲ့ တရားဝင် သုံးနေတာ က တော့ မက်ထရစ် စနစ်ပါ။ စကာင်္ပူ မှာ လည်း မက်ထရစ် ပါပဲ။ ဒါကြောင့် မက်ထရစ် စနစ် ကို မသုံးရင် အာဆီယံ နဲ့ ယှဉ်တဲ့ အခါ၊ အပြန်အလှန် အလုပ်လုပ် ရတဲ့ အခါ Barrier တစ်ခု ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
မှတ်မှတ်ရရ SI Units ရဲ့ကောင်းချက်တွေ နဲ့ ဘာကြောင့် စသုံးမယ် ဆိုတာ ကို ကျနော်တို့ အထက်တန်းလောက်ထဲက စထိတွေ့ခဲ့ရတာ မို့ အနှစ် သုံးဆယ်ကျော်နေပါပြီ။ စနစ် အသစ်၊ အဆန်း လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အင်တာနက် က အချက်အလက်တွေ အရ လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ IP units ကို ဖက်တွယ် သုံးနေဆဲ နိုင်ငံ သုံးနိုင်ငံပဲ ရှိပါတယ်တဲ့။ အမေရိကန် ရယ်၊ မြန်မာ ရယ်၊ နဲ့ Liberia ဆိုတဲ့ အာဖရိက အနောက်ကန်းရိုးတန်း က နိုင်ငံငယ် လေးရယ်ပါ။ Liberia က ဂရုစိုက် စရာ မရှိလို့ စာရင်းထဲ မထည့်ရင် US & us (မြန်မာ) ရယ် ပဲကျန်ပါတယ်။
US မှာ က Standards တွေ က အတည်တကျ သောင်းနဲ့ ချီနေတာ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စံ အများဆုံး နိုင်ငံ။ ဘာလုပ်လုပ် တိုင်းစရာ စနစ် ပေတံ လေးက ပါရမှ။ Codes တွ တောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်နေပြီ။ အခု နောက်ပိုင်း ထွက်သမျှ Codes/ Standards တွေ ကျနော်သိသလောက် အားလုံးလိုလို Dual Units တွေနဲ့ပါ။ ဒါမှ အခြားနိုင်ငံ တွေ မှာ လည်း ဆက်သုံးနိုင်မှာ မို့ပါ။ International Building Code ( IBC) ကို ကြည့်ရင်လည်း Dual Units အတွက် ပြင်ထားတာမှန်း သိသာပါတယ်။ (ယူနစ် အပြောင်းမှာ မှားလေ့ရှိတာ လည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ သတိထားနိုင်ဘို့ပါ။)
Science Subjects ( Chemistry/ Chemical) တွေ အားလုံး က မက်ထရစ် ( SI) နဲ့ဘဲ သင်ပါတယ်တဲ့။ Engineering Curriculum မှာ တောင် ကျနော့် မန်နေဂျာ ဟောင်း ယူလာပြတဲ့ သူ့ Mechanical Engineering ( Undergrad) HVAC မေးခွန်း အရ Mechanical Engineering က SI units နဲ့သင်တာပါ။
အမေရိက မှာ ကမ္ဘာကျော် ထင်ရှားတဲ့ Engineering Company နှစ်ခု ဖြစ်တဲ့ the US Army Corp of Engineers and NASA တို့ က လည်း Metric ( SI) units ပဲ သုံးပါတယ်။ သိပ္ပံ ( Science Subjects) တွေ လည်း မက်ထရစ် ပါပဲ။ Laboratory တွေ မှာ xxx/ 100 mL ဆိုတာမျိုး ပဲ တွေ့ရပါမယ်။ (/ tbs လို့ မတွေ့မိပါ။)
Consumer Products တွေ အားလုံး မှာ မက်ထရစ် လုံးလုံးမဟုတ်ရင် တောင် Dual Units ပါ။ ဥပမာ၊ နွားနို့ Half Gallon ( 1.89 L)၊ ရေချိုးခန်းသုံး ဆပ်ပြာ၊ သွားတိုက်ဆေး လိုမှာ ကျတော့ 251 mL ( 8.5 fl. oz.) , NET WT 3.0 oz ( 85 g)။ အဲ သောက်ဆေးတွေ မှာ ပါဝင်တဲ့ အမယ် တွေ ကျတော xxx mg (မက်ထရစ် လုံးလုံး) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေ မှာ ပါတဲ့ energy value ကို Calorie နဲ့ ပြပါတယ်။ Btu နဲ့ပြတာ မတွေ့မိပါ။
ကားတွေ က မိုင်နှုန်း ပြတဲ့ ဒိုင်ခွက် မှာ လည်း အပြင် က မိုင်၊ အတွင်း က ကီလို မီတာ ပါ။ မြန်မာပြည် မှာ ကားတွေ က ကီလိုနဲ့ ပြပြီး လမ်းတွေ က မိုင်၊ ခုတစ်ခေါက် ပြန်တော့ မိုင်တိုင် တွေ ကို ကီလိုမီတာ နဲ့ ပြန်လဲ နေတာ တွေ့မိတာမို့ လမ်းဆောက်လုပ် ရေး က တော့ စပြောင်းနေပြီ လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဘယ်မောင်းညာမောင်း ကိစ္စ ကိုလည်း ပြောင်းဘို့ လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်….
ကားအင်ဂျင် (ဆလင်ဒါ) အရွယ်အစား မှာ လည်း 3L, 3.5L စသည်ဖြင့်။2Pints, 1 gal မရှိပါ။ ( horse power ကိုတော့ သုံးပါတယ်။)
Engineering, Procurement and Construction Management ( EPCM) Companies အကြီးကြီးတွေ မှာ လုပ်မယ် ဆိုရင် လည်း ယူနစ် နှစ်ခုလုံး ကို သုံးနိုင်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ US Projects တွေ အတွက် IP ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အခြားနေရာ တွေ မှာ တော့ မက်ထရစ် ပါ။ (ဆောက်လုပ်ရေး မဟုတ်တဲ့ Petrochemical & ပိုက်လိုင်း စနစ် တွေ မှာ တော့ IP units အားကောင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက လည်း Engineering Standards / Practices တွေ က အခြေခံ ထားပြီး စနစ်ကျနေပြီး ဖြစ်တာမို့ ပါ။)
တစ်နိုင်ငံလုံး မှာ ရှိတဲ့ အဆောက်အဦ တွေ သာမက Engineering Products တွေ အားလုံးလိုလို က စနစ်တကျ Standards တွေ နဲ့ လုပ်ခဲ့ တာမို့ ပြင်ဘို့ကတော့ အချိန်ကြာအုံးမှာ ပါ။ ကျနော့်ဆရာ ပြောသလို ဒီမှာ Freeway တွေ ရှိတယ်။ သွားချင်တဲ့ နေရာ မြေပုံကြည့်၊ လမ်းညွှန်ကြည့်ပြီး သွား လွယ်လွယ်လေး၊ ခု GPS နဲ့ ဆို ပိုတောင် သက်သာသေးတယ်။ ဟော မင်းအိမ်က တံခါးမ မကြိုက်လို့ လဲချင်ရင် မင်းကြိုက်တဲ့ ဆိုင်က သွားဝယ် Home Depot, Lowe's ဘယ်ဆိုင် က ဝယ်ဝယ် အိမ်ပြန် လာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တပ်၊ ဘယ်သူမှ ခေါ်စရာ မလိုဘူး ကွက်တိပဲ တဲ့။ ငါတရုတ်ပြည် မှာ တံခါး မှာဝယ်ရတော့ Spec. တွေပေး၊ လိုတဲ့ အတိုင်းအတာ တွေပေး တစ်ဆင့်ချင်း အမှားမပါ အောင် သေချာအောင် အဆင့်ဆင့် စစ်ပြီး လုပ်တာတောင် ရောက်လာတော့ မှားသေးတယ် တဲ့။
ကျနော် နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Architect တစ်ယောက် ရဲ့ ပြောကြားချက် အရ ယူအက်စ် မှာသုံးလေ့သုံးထ ရှိတဲ့ တံခါးမ ( Main Door) အရွယ် အစားတွေ က တော့ 3'x7' for Commercial and3'x6'-8" for Residential ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဒါကြောင့် US မှာက တော်ရုံ နဲ့ IP units ကို တော်တော် နဲ့ ပြောင်းဘို့ မလွယ်သေးပါဘူး။ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် အချို့ အခြားနိုင်ငံ ကြီးတွေ ပြောင်းမဲ့ အချိန်မှာ တုန်းကတော့ လိုက်ပြောင်းဘို့ အတော်ကြိုးစားခဲ့ ကြသေးတယ် လို့ သိရပါတယ်။ အလုပ် မှာ တော့ နှစ်ယူနစ် လုံး ကောင်းကောင်း သုံးတတ်ဘို့ လိုတယ်။ ကျနော်တို့ က Over sea projects တွေ လည်း ကိုင်ရတာမို့ ပါ။ လက်ရှိ ယူနစ်နှစ်ခု လုံးသုံးပြီး အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ကျနော့်အဖို့ မက်ထရစ် ရဲ့ ပိုမို ခရီးရောက်မှု ကို အမွှန်းမတင် လိုပါ။ IP units ဆိုတာ ကလည်း ငယ်ငယ်ထဲက ရင်းနှီးလာတာမို့ မက်ထရစ် ပရောဂျက် ဆို မက်ထရစ်၊ IP ပရောဂျက် ဆို IP units ဘာသာမပြန် ယူနစ် မပြောင်းဘဲ တွက်နိုင်ပါတယ်။
ကဲနောက်ဆုံး ကျန်နေတဲ့ နိုင်ငံထဲ က တစ်နိုင်ငံ အကြောင်းကို တော့ ပြောပြပြီးပါပြီ။ တစ်နိုင်ငံ ကို တော့ စာရင်းထဲ ထည့်လို့ မပြောလိုတော့ပါ။ ကျနော်တို့ ရွှေနိုင်ငံ ဘက် ကို ပြန်လှည့်ရအောင်ပါ။
ပထမ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ဝန်းကျင် က Indian Standards (ကုလား ကျမ်းအိုကြီးများ) ကို ဆက်ပြီး ဖက်တွယ်ထားရင် တော့ IP units ကလည်း ဆက်ပြီး အသုံးဝင် မှာ အသေအချာပါ။ ဆယ်စုနှစ် ပေါင်း များစွာ နောက်ကျ ကျန်ခဲ့ လို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါးဆယ် လောက် က နေ ပြန်စမယ် ဆို ရင် နှစ်ခါ မက နာပါတယ်။ လမ်းတွေ မှာ ကီလိုမီတာတိုင် တွေ ပြောင်းတပ်နေပါတယ်။
USA Standards vs Myanmar
Standards တော်တော်များများ က နိုင်ငံတကာ က မှီရမယ်။ British Standards တွေ က တော့ SI units ပဲ။ ဒါဆို American Standards တွေ ယူမယ်။ ယူနစ် က ဂါလံ၊ ဂါလံချင်း တူသလား၊ မတူပြန်ပါ။ [ US gal= 3.785 L, IP gal= 1.2 x US gal ( 4.546 L) ]။ မြန်မာပြည် မှာ သုံးလေ့ ရှိတာ က Imperial Gallon ပါ။ အခြား ဒီလို US-UK ကွဲတာ လေးတွေ ရှိတဲ့ အချိန် မှာ UK စနစ် ကို သုံးခဲ့တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ က US Standards တွေ ကို ဒီအတိုင်း ယူသုံးရင် လွဲအုံးမှာပါ။
ခုချိန်ထိ ဂါလံ နှစ်မျိုး သေချာ မကွဲတဲ့ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာလောင်း လေးတွေ တွေ့နေရတုန်းပါ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက် တွေ အရ အကြမ်းအားဖြင့်။
US gal [3.785 L, 231 in3, 8.34#]: 1706 ခုနှစ်က Queen Anne သတ်မှတ်ခဲ့ တဲ့ wine gallon ကို အခြေခံပါတယ်။ 231 cubic inches နဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ [ Volume ofacylinder 6" deep and 7" dia ]
UK gal / igal ( Imperial ), [4.546 L, 277.42 in3, 10#] : 1824 မှာ UK က သူ့ရဲ့ ယူနစ် ကို ရေသန့် 10 ပေါင် ရဲ့ ထုထည်နဲ့ ညီတဲ့ ပမာဏ ကို Imperaial gallone လို့သတ်မှတ်ပြီး ပြောင်းလဲ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်ဂါလံ က ပိုကြီးသလဲ မှတ်ရလွယ်အောင်။ ။အင်္ဂလန် က နေ အမေရိက ကို အလည်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ် တွေ ဘီယာစုတ် ဘို့ တစ်ပိုင့် လို့ မှာတဲ့ အခါ ပိုင့်မပြည့် ဘူးလို့ စိတ်ဆိုးကြပါသတဲ့။ 1 igal = 1.2 us gal (approx.)
မက်ထရစ် စနစ် က ဘယ်လောက်ပို ရှင်းလဲကြည့်ရအောင်။
Length: meter (m) vs [inch, foot, yard, chain, furlong, mile, …]
Weight: kilogram (kg) vs [ gr, oz, lb, Stone, Quarter, Hundredweight, Ton ], UK or US
Volume: liter (L)/ m3=1,000 L vs [ in3, ft3, yd3, US or UK (fl. oz., pint, quart, gallons, …) ]
10 power, giga (G-), mega (M-), kilo (k-), centi (c-), milli (m-), micro (µ-) စတဲ့ prefix တွေ နဲ့ SI units ကို ပိုပြီး ရိုးရှင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Imperial units က လှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုးရှင်း ထိရောက်မှု မှာတော့ မက်ထရစ် ကို အမှတ်ပေးတဲ့ သူ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် မက်ထရစ် စနစ် ကို ပြောင်းကုန်ကြတာ လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
Exercise တစ်ခုလောက် လုပ်ကြည့်ရအောင် ပါ။
အခန်းတွေ ရဲ့ အရွယ်အစား နဲ့ ဧရိယာ၊ ထုထည် တွေ ကို Excel Spreadheet နဲ့ တွက်ကြည့်ပါ။ ပေ၊ လက်မ ပြီးတော့ 1/ 16" precision ပုံထဲ က အတိုင်း ယူပြီးတော့။
မိသားစု တစ်စု ပျမ်းမျှ လူဦးရေ ငါး ယောက်ပါ အိမ်ထောင် စု ၂၀ အတွက် သောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်။ လူတစ်ဦး လျှင် IP Gal 30 (135 L) နှုန်း ယူဆပါ။ ရေလှောင်ရန် ပမာဏ တစ်ရက်စာ။
ရေကန်၏ Structure Load ကို ခန့်မှန်းပေးပါ။
စမ်းကြည့်ပါ။ ပြီးရင် Pipe Selection Charts တွေ မသုံးပဲ ဂဏန်းတွက်စက်သုံးပြီး ပိုက်အရွယ်အစား ရွေးကြည့် လိုက်ပါအုံး။
စကားမစပ် တစ်ဧက မှာ Square Foot ဘယ်လောက်ရှိလဲ သိနေသေးတဲ့ သူ ဘယ်နှယောက် ရှိမလဲ မသိ။ (ဆော့ဖဝဲ မသုံး၊ စာအုပ် မဖတ်ပဲ လက်တမ်း သိတဲ့ သူ ကို ပြောတာပါ။)
ယူနစ် အပြောင်းအလဲ အတွက် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များ ၏ အခန်းကဏ္ဍ။။
မက်ထရစ် စနစ် ကို တစ်ဖြေးဖြေး ပြောင်းသွားဘို့ လိုအပ်တယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ပထမ ဆုံး ပြင်ရမှာ က Higher Education အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းတွေမှာ သင်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နဲ့ စာအုပ်တွေ က စပြီး မက်ထရစ် စနစ်တွေ ဖြစ်နေဘို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံ ပညာ အထက်တန်း မှာ သင်လာတဲ့ Physics, Chemistry & Mathematics က ရခဲ့တဲ့ မက်ထရစ် စနစ် အခြေခံ တွေ ဆက်သုံး သွားနိုင်မှာပါ။
ယူနစ် အပြောင်းအလဲ နဲ့ အခက်အခဲ များ။
နိုင်ငံ အားလုံး လိုလို SI units / Metric Units ကို ပြောင်းခဲ့ ကြတဲ့ အခါ အားလုံး ပိုမို လွယ်ကူသွားသလား ဆိုတဲ့ အချက် ကို လည်း ကြည့်ရအောင် ပါ။ ပိုပြီး ခက်ခဲသွားတာ တွေ လည်း ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Engineering Standards & Building Codes တွေ ကို ကြည့်ရင် အကျိုးသက်ရောက် မှု အချို့ကို တွေ့ ရပါမယ်။
US Codes တွေ မှာ IP unit အခြေခံ မှာ မှတ်ရလွယ် ပေမဲ့ SI လည်းပြောင်းရော မှတ်ရခက်သွားတာ မျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ
IBC မှာ အထပ်မြင့် အဆောက် အအုံ ကို 75 feet ( 22.86 m)
မီးသတ်ဘို့ အတွက် Class I Standpipe လိုအပ်ချက် 50 psi ( 345 kPa) residual pressure loss withaflow of 250 gpm ( 946.4 L/ min) မျိုးတွေပါ။
Air Conditioning Central Chilled Water Plant မှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ Chilled Water 2.4 gpm/ RT @ dT 10°F, Condenser Water 3.0 gpm/ RT ဆိုတာ က လည်း SI units ထက်မှတ်ဘို့ ပိုလွယ်နေတတ် ပြန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် က ယူနစ် ပြောင်းတဲ့ အခါ အမှားလေးတွေ ပါတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ Temperature Differential (T2-T1), ΔT=5°C (41°F) ဆိုတာမျိုးပါ။ အမှန် က ΔT(°F)= 1.8 * ΔT(°C) ဖြစ်တာမို့ 5°C (9°F) ဖြစ်ရပါမယ်။
say; T1=15 C (59F), T2=20C(68F); T2-T1 = (20–15= 5°C, 68-59=9°F)
Download PDF "G005_R02 IP or SI units.pdf" from Dropbox
SI, Metric, Imperial and American
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 10:47 PM Labels: General